चलचित्रमा छक्का प्रहार::Online News Portal from State No. 4
चलचित्रमा छक्का प्रहार
काठमाडौं, १८ पुस – नेपाली चलचित्रका लागि सन् २०१६ सफल वर्ष साबित भएको छ । इतिहासमै सर्वाधिक धेरै व्यवसाय गर्नेदेखि धेरै चलचित्र सफल भएको रेकर्डसमेत वर्ष २०१६ ले तय गरेको छ । व्यावसायिक रूपमा मात्रै होइन ‘स्टोरी टेलिङ’का दृष्टिले पनि यो वर्षले ‘युटर्न’ लिएको छ । नयाँ दर्शक धेरै थपिएका छन् । कहिल्यै नेपाली चलचित्र नहेर्ने दर्शक हलसम्म पुगेका छन् । नेपाली चलचित्र राम्रो बन्दैन भन्ने सोच ब्रेक भएको छ । यो शैली र सफलताले निरन्तरता पाए नेपाली चलचित्रको प्रभाव अब सीमाबाहिर पनि पुग्नेमा दुईमत छैन् ।
नेपाली चलचित्र कतिसम्म सफल हुन सक्छ भन्ने मानक बन्यो दीपा श्री निरौला निर्देशित ‘छक्का पञ्जा’ । यो चलचित्र रिलिज भएको आज एक सय १६औं दिन भएको छ । गोपीकृष्ण, गुण र गंगा हलमा अझै यो चलचित्र प्रदर्शन भइरहेको छ । पुस २ गते चारवटा हलमा १००औं दिन मनाएको छक्का पञ्जाले देशका विभिन्न २१ हलमा ५१ दिन मनाएको थियो । नेपाली चलचित्रको यस्तो सफलता सायदै कसैले सोचेका थिए । निर्मातामध्येका दीपकराज गिरी स्वयंले त्यो कल्पना गरेका थिएनन् । ‘यो स्तरको आशा गरेका थिएनौं । हामी नै कोहिनूरको सफलतालाई कसैले जित्न सक्दैन भन्थ्यौं तर छक्का पञ्जाले त्यसको दोब्बर बढी व्यवसाय गरिसकेको छ’, गिरीले भने, ‘नेपालभित्र १६ करोड र विदेशको समेत गर्दा २५ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको व्यवसाय गरिसकेको छ ।’
नेपाली चलचित्रले प्रदर्शनको सुखद सय दिन नमनाएको वर्षौं भइसकेको थियो । तर, पहिले र अहिले सय दिन मनाउनुमा पनि धेरै फरक छ । पहिले सीमित हलमा सीमित सोसहित सय दिन मनाउँथ्यो । अहिले धेरै हल, त्यो पनि मल्टिप्लेक्समा सय दिन मनाउनु चमत्कार नै मान्नुपर्छ । त्यो चमत्कार चलचित्र छक्का पञ्जाले गरेको छ ।
सफलताको यस शृंखलामा छक्का पञ्जालाई पछ्याउँदै चलचित्र ‘जात्रा’ले पनि काठमाडौंका केही हलमा ५१ दिन पूरा गरेको छ । प्रदीप भट्टराईले निर्देशन गरेको यस चलचित्रमा विपिन कार्की, वर्षा राउत, रवीन्द्र सिंह बानियाँलगायतले अभिनय गरेका छन् । राम्रो स्क्रिप्ट, वास्तविक अभिनय र कथा भन्ने शैली प्रभावकारी भयो भने स्टार कलाकार चाहिँदैन भन्ने पुष्टि यो चलचित्रले गरेको छ । ‘फिल्म मेकरले हतार होइन, मेहनत गर्नुपर्छ’, दीपकराज भन्छन्, ‘१०÷१२ वटा यस्तै राम्रा नेपाली चलचित्र बन्यो भने नेपालमा विदेशी चलचित्र दोस्रो दर्जामा पुग्छ ।’
वर्ष २०१६ को सुरुआतमै दीपेन्द्र के खनाल निर्देशित चलचित्र ‘पशुपतिप्रसाद’ले ‘ग्रिन सिग्नल’ देखाएको थियो । व्यावसायिक रूपमा होस् वा अवार्डमा; यो चलचित्रले जति जित हासित गर्‍यो, प्रदर्शन सुरु हुनुअघि कसैले त्यति अपेक्षा गरेका थिएनन् । तर, राम्रो चलचित्र बन्यो र ‘माउथ पब्लिसिटी’ पायो भने कतिसम्म सफल हुनसक्छ भन्ने उदाहरण बन्यो ‘पशुपतिप्रसाद’ ।
छक्का पञ्जा, जात्रा, पशुपतिप्रसादजस्ता सफल चलचित्र हेर्दा लाग्छ— बल्ल नेपालमा क्यानभास अनुसारको चलचित्र बन्न थालेको छ । निर्माता निर्देशकले सक्ने कुरामा मात्र चलचित्र बनाउन थालेका छन् । आफ्नै कथा बोक्न र भन्न सुरु गरेका छन् । व्यावसायिक रूपमा सफल भएकामात्रै होइन, विश्वका विभिन्न मुलुकमा आयोजना गरिएका प्रतिष्ठित चलचित्र महोत्सवमा अवार्ड जितेका नेपाली चलचित्रले पनि यस्तै विशेषता बोकेका छन् । चाहे मीनबहादुर भामले निर्देशन गरेको ‘कालो पोथी’ होस् वा दीपक रौनियार निर्देशित ‘सेतो सूर्य’ ।
यस वर्ष सफल भएका चलचित्रमा भुवन केसी निर्देशित ‘ड्रिम्स’ले पनि बेग्लै छाप छाडेको छ । पुरानो ‘फर्मेट’मा बने पनि यो चलचित्रलाई नयाँ पुस्ताले निकै मन पराए । कथामा चुस्तता, राम्रो लोकेसन छनोट, गजबको छायांकन अनि बिनासम्झौता चलचित्र बनाउन सक्यो पनि जुनसुकै फर्मेटका चलचित्रलाई दर्शकले माया गर्छन् भन्ने उदाहरण बन्न सफल भयो, ड्रिम्स ।
वर्ष २०१६ मा प्रदर्शनमा आएका ‘गाजलु’, ‘पुरानो डुंगा’, ‘बिजुली मेसिन’, ‘चपली हाइट २’, ‘तीन घुम्ती’, ‘ब्रासलेट’, ‘हाउ फन्नी’ लगायतका केही चलचित्र चर्चामा रहे । केहीले राम्रै व्यवसाय गरे भने केही चर्चामै सीमित रहे । अभिनेशविक्रम शाहको ‘सिजन अफ ड्रागन फ्लाइज’, नरेशकुमार केसीको ‘डाइङ क्यान्डल’, पूजा गुरुङ र विभूषण बस्नेतको ‘दादया’ फरक तर ‘नोटेबल’ चलचित्रमा दरिए ।
लामो समयपछि नेपाली चलचित्रमा देखिएको सफलताले धेरैलाई उत्साहित बनाएको छ । वर्ष २०१६ मा देखिएको कथा भन्ने शैली, नेपाली क्यानभास अनुसारको चलचित्र निर्माण शैली, स्क्रिप्टमा मेहनत अनि नयाँ दर्शकलाई कायम राख्नसके यो वर्ष नेपाली चलचित्रका लागि कोसेढुंगा साबित हुनेमा दुईमत छैन ।
पढ्दै बालबालिका बागलुङ नगरपालिका वडा.नं. ६ मालिकामा स्थिीत पढ्दै गरेका साना—साना...
नगरपालिकाको जिआईएस प्रणाली जोड्ने योजना अलपत्र बागलुङ, २९ कार्तिक — दुई बर्षअघि बागलुङ नगरपालिकाले जिआईएस...
पदमार्ग जोखिममा परे पछि तीस वर्ष बाटो नखनिने पर्वत, २९ कार्तिक — सवारीसाधन गुडाउन खनिएका सडकका कारण...
बैंकमा पेन्सन बुझ्न सास्ती बागलुङ, २९ कार्तिक — जैमिनी नगरपालिकाको राङखानीका ७१ बर्षिय...
२०७५ कार्तिक २९ बिहिबारको राशिफल २०७५ कार्तिक २९ बिहिबार अष्टमी,१५ नोभेम्बर २०१८ तपाईको आज मेष– थालेका...
योजना सम्झौता छिटो गर चाडपर्वका कारण जिल्लाका कुनैपनि स्थानीय तहले विकासे कामलाई गति...
स्थानीय रैथाने जातको धान मासिदै पर्वत, २९ कार्तिक — बिहादी गाउँपालिकास्थित रानीपानीकी बालिका पराजुलीले...
मधुमेह के हो ? कसरी नियन्त्रणमा राख्ने ? मधुमेहलाई चिनी वा सुगर रोग पनि भनिन्छ । विश्वमा...
निरूको घर ‘छोरीको जन्म, हारेको कर्म’ नारायण गोपालको गीतले विश्वज्योति सिनेमा...
हाम्रो फोटो सार्वजनिक भएनि तातोपानीको प्रचार-प्रचण्ड बेनी, २८ कात्तिक – नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का...